Dufanka Avanafil (330784-47-9) hplc = 98% | AASraw budada jinsiga
/ Products / Galmada Horumarinta Deedaha / Budada Avanafil
Rating: SKU: 330784-47-9. Categories: Isticmaal lab ah, Galmada Horumarinta Deedaha
AASraw waxay ku jirtaa karti iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga ee budada Avanafil (330784-47-9), iyada oo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Budada Avanafil wuxuu ku shaqeeyaa kordhinta socodka dhiigga ee guska inta lagu jiro kicinta galmada. Socodka dhiigga ee kordhay wuxuu sababi karaa kacsi. Faa'iidada avanafil ayaa ah inay leedahay dhaqso dhaqso ah ficil marka la barbar dhigo hormoonnada kale ee xoojiya galmada. Si dhakhso ah ayaa loo nuugaa, oo gaadhaa heerka ugu sarreeya qiyaastii illaa 30-45 daqiiqo.
Fiidiyowga sawirada Avanafil
Raw Avanafil Calaamadaha aasaasiga ah
Name: Budada Avanafil
Qaaciddada Molecular: C23H26ClN7O3
Miisaanka kelli: 483.95
Dhibcaha Biyaha: 150-152 ° C
Raw Avanafil wareega budada
Magacyada Kimikalka: Budada Raw Avanafil
Magacyada Brandada: Stendra
Isticmaalka budada Raw Avanafil
Budada Avanafil ee Erectile Disfunction
Sababtoo ah budada Raw Avanafil waa iskudubka ugu dambeeyay ee ku xiran dawooyinka aan kala go 'lahayn, aynu soo qaadanno si dhow u eegno inta aynaan is barbardhigin daawooyinka kale ee ED. Dhibaatooyinka klinikada, guud ahaan 77% ragga ragga oo qaba cillad guud oo qalafsan oo qaadatay budada Raw Avanafil waxay gaareen heerkulbeeg marka la barbar dhigo 54% ragga oo qaada placebo. Ragga ragga qaba xanuunka macaanka ee la xiriira sonkorowga, 63% waxay ku guuleysteen kacsan ka dib markii ay qaadeen budada Raw Avanafil marka la barbar dhigo 42% oo qaateen placebo.
Aynu eegno natiijooyinka hal tijaabo oo ah 12 usbuuc Wajiga III gaar ahaan. Wadar ahaan ragga 646 ayaa si aan kala sooc lahayn loogu qoondeeyay inay qaataan 50, 100, ama 200 mg oo ah budada Avanafil 30 daqiiqo kahor intaan la bilaabin waxqabadka galmada. Ma jirin wax xaddidaad ah oo ku saabsan cuntada iyo isticmaalka aalkolada. 300 isku day galmo oo la sameeyay intii lagu jiray daraasada, 64% ilaa 71% waxay ku guuleysteen ragga qaatay budada Raw Avanafil marka la barbar dhigo 27% ragga qaatay placebo. Akhbaarta kale ee wanaagsan: 59% ilaa 83% ee 80 isku dayga galmada waxay sameeyeen in kabadan 6 saacadood kadib markay qaateen budada Raw Avanafil way guuleysteen marka la barbardhigo kaliya 25% isku dayga guusha ee ragga qaatay placebo. Ragga qaarkiis, budada Avanafil waxay ku shaqeeyeen ugu yaraan 15 daqiiqo. (Goldstein 2012)
Dhab ahaan, hal shay oo laga yaabo inay kala soocaan budada Raw Avanafil ee ka mid ah afarta daroogada ED waa sida ugu dhakhsaha badan ee ay u shaqeyso. Dr. Wayne Hellstrom, oo ah borofisar ku takhasusay cilmiga cudurrada ee Tulane University of Medicine ee New Orleans, ayaa lagu sheegay maqaal lagu qoray "Raw Avanafil budo" waa suurta galnimada ugu dhaqsaha badan afarta ", sida tijaabooyinka kiliinikada ay muujiyeen inay u shaqeyn karto sida 15 daqiiqado. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiray warar sheegaya in budada Cialis ay ka shaqeynayaan daqiiqado 15 sidoo kale.
Waa maxay qiyaasta budada Avanafil
Kiniinada Avanafil waxay u timaadaa sidii kiniin si ay afka u qaataan. Ragga oo qaadanaya 100-mg ama 200-mg mg, Root Avanafil waxaa badanaa la qaataa ama aan cunin marka loo baahdo, oo ku saabsan daqiiqado 15 ka hor intaan jinsiga galin, wax ka badan hal jeer maalintii.
Ragga oo qaadanaya 50-mg mg, waxay budada Raw Avanafil badanaa la qaataa ama aan laheyn cunto sida loogu baahan yahay, oo ku saabsan daqiiqado 30 ka hor inta aan la sameynin ficil galmo. Ha qaadan budada Raw Avanafil marar badan hal jeer saacadaha 24.
Isticmaalka Carruurta laguma talinayo.
Qiyaasta daawadani waxay u kala duwanaan doontaa bukaanada kala duwan. Raac amarada dhakhtarkaaga ama tilmaamaha ku qoran calaamadda. Macluumaadka soo socda waxaa ku jira kaliya qiyaasta qiyaasta daawadan. Haddii qiyaastaada ay ka duwan tahay tan kale, ha baddalin haddii uusan dhakhtarkaagu kuu sheegin inaad sidaas sameyso mooyee.
Sida uu u shaqeeyo budada Avanafil
Kalluunka Raw Avanafil wuxuu ku jiraa nooc daawo loo yaqaan 'phosphodiesterase (PDE)'. Waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cillad aan caadi ahayn (ED: Awood la'aan, awood uma lihid in la helo ama la xoqdo ragga). Waxyaabahan kor u qaadka labka ah ayaa magaceeda ka helay qaybta firfircoon ee ugu muhiimsan taas oo ka caawisa wareegga dhiigga ee jidhka sida caadiga ah. Waxaa jira maaddooyin kale oo ka dhigaya budada Raw Avanafil oo waxtarka leh laakiin aan haysan saameynta iyo saameynta badan ee ay ugu weyn tahay inay bixiso.
Waxay ka shaqeysaa kordhinta dhiigga ee guska inta lagu jiro dareenka galmada. Socodkan dhiigga ee kor u kaca wuxuu keeni karaa kacsi. Dufanka Avanafil ma daweynayo erectile erectile ama kordhinta rabitaanka galmada. Macaanka Raw Avanafil kama hor istaagayo uurka ama faafidda cudurrada galmada lagu kala qaado sida fayruska difaaca jidhka (HIV).
Kalluunka Raw Avanafil waa daroogo afka ah oo loo isticmaalo daaweynta wax aan loo baahnayn (awood la'aanta helitaanka ama ilaalinta qalabka galmada), oo sidoo kale loo yaqaano erectile disfunction (ED). Waxay ku jirtaa daroogada daroogada loo yaqaan 'phosphodiesterase inhibitors' kuwaas oo ay ku jiraan tadalafil (budada Cialis), sildenafil (Viagra) iyo vardenafil (Levitra). Cirridka guska waxaa keena buuxinta guska dhiigga. Buuxinta waxay dhacdaa sababtoo ah xididdada dhiiga ee dhiigga ku keena guska oo kor u kaca iyo in dhiig badan la geliyo guska, isla mar ahaantaana, marinnada dhiigga ee dhiigga ka qaadaayo guska oo hoos u dhiga xajmiga iyo ka qaadista dhiigga yar ee guska . Kicinta galmada ee keenaysa kacsiga waxay keenaysaa soo saarida iyo sii daynta qandhada nitrric ee guska. Qodobka Nitrik wuxuu keenaa enzym, cyclase guaanlate, si loo soo saaro guanosin monophosphate cyclone (cGMP). Waa cGMP oo ugu horreyn mas'uul ka ah kordhinta iyo yareynta mugga xididdada dhiigga ee dhiigga ku jira iyo ka soo guska, siday u kala horreeyaan, oo keenaya kacsi. Marka cGMP la burburiyo fiyuuska kale, fosfodiesterase-5, marinnada dhiigga waxay ku soo laabtaan qaddarkooda caadiga ah, dhiig ayaa ka tagaya guska, korna u dhisto. Macdanta Raw Avanafil waxay ka hortagtaa fosfodiesterase-5 in ay burburiso cGMP si ay cGMP u sii dheeraato. Ku adkaysiga cGMP wuxuu keenayaa dhiig yar oo giigsan oo dheecaan ah. Budada Raw Avanafil waxaa ogolaaday FDA bishii April 2012.
Cabashooyinka laxiriira waxyeellooyinka xun:
• Midab takoorka: Wuxuu sababi karaa takoorka la xidhiidha takoorka midabtakoorka. U isticmaal taxaddar ku saabsan bukaanka qaba cudurka 'retinitis pigmentosa'; dadka laga tirada badan yahay waxay leeyihiin xanuunka hidda-socodka fosfeyriyada (retrieve fosfoodi-yada) (xog la'aan ma heli karto).
• Dhageysiga maqalka: Dhimashada si degdeg ah ama maqal la'aan ah ayaa loo soo sheegay in dhif ah; isbeddelka maqalka waxaa la socon kara tinnitus iyo dawakh. Xidhiidh toos ah oo u dhaxeeya daaweynta iyo maqalka lumitaanka lama go'aamin.
• Dareemida: Dhiirrigelinta cadaadiska dhiigga ayaa laga yaabaa inay dhacdo sababtoo ah saamaynta kudheeraydhka; Isticmaal taxaddar leh bukaanka qaba xannibaad ka soo baxa lugta bidix (aortic stenosis ama hypertrophic cardiomyopathy); waxay noqon kartaa mid aad u xasaasi u ah ficillada ba'an. Isticmaalka isku-dhafan ee daaweynta daawada "alpha-adrenergic antagonist" wuxuu sababi karaa dhiig-dareen-celin; bukaan-socodka waa in ay ahaato mid xitaa haodynam ahaan ka hor inta aan la bilaabin daaweynta qiyaasta ugu hooseeysa. Bukaanku waa in ay iska ilaaliyaan ama yareeyaan isticmaalka ethanol ee muhiimka ah maaddaama tani ay kordhin karto khatarta cirbadaha jirka.
• Priapism: Kacsi xanuun badan> 6 saacadood oo waqti ah ayaa la soo sheegay (marar dhif ah). Faray bukaanka inay raadsadaan daryeel caafimaad oo deg deg ah haddii kacsiga uu sii socdo> 4 saacadood. Si taxaddar leh u isticmaal bukaanada qaba xaalado u horseedi kara inay ku dhacdo priapism (sickle cell anemia, multiple myeloma, leukemia).
Avanafil Root Powder
Suuq-geynta Shirkadda Raw Avanafil
Maadada Raw Avanafil ma leedahay Saameyn Waxyeello ah
Kareemka Raw Avanafil wuxuu sababi karaa waxyeelo. U sheeg dhakhtarkaaga haddii mid ka mid ah calaamadahaani ay aad u daran yihiin ama aysan tagin:
Dhibaatooyinka qaarkood ayaa noqon kara mid halis ah. Haddii aad dareento mid ka mid ah calaamadahan, wac dhakhtarkaaga isla markiiba ama hel daaweyn caafimaad oo degdeg ah:
kacsi oo soconaya waqti ka badan saacadaha 4
aragga lama filaan ah ee hal ama labadaba (eeg hoosta macluumaad dheeraad ah)
lumis maqal la'aan ah (fiiri hoosta macluumaad dheeraad ah)
indhaha oo barara
Kareemka Raw Avanafil wuxuu sababi karaa waxyeelo kale. Wac dhakhtarkaaga haddii aad qabto wax dhibaato ah oo aan caadi ahayn inta aad qaadaneyso daawadan.
Sida loo iibsado budada Avanafil oo laga soo saaro AASraw